Ndiani Martin Vrijland? : Martin Vrijland
Ndiani Martin Vrijland uye nei achizvichengetedza kunyora nyaya?
Mune zvinyorwa zvishoma ndakatsanangura kuti mamwe mhizha muNetherlands yakanyatsodzorwa. Ini ndiine chinangwa cheku "kutungamirirwa nebasa rakavanzika". MuNetherlands, boka racho rinonzi AIVD. Kuti ukwanise kuratidza kuti, iwe chaizvoizvo unofanirwa kupindira. Zvokuti ini ndakapotsa ndakabudirira kusati ndatorwa, asi pane zvakawanda zvekuita, izvo zvakaita kuti ndidzingwa. Zvandichada kuita naizvozvo zvinotsanangura muchidimbu nhoroondo yekubuda kwangu semunyori uye kuratidzira mitsara yaunogona kuverenga iwe pachako kana iwe uchibvumirana nekutonga kwangu kana kwete.
Pandakatanga kunyora mu2012, ini handina kuda kuzviita zvachose. Wangu wandakapedzisira kushandira kwandaishanda semutengesi wepasi rese maneja akaenda kubhuroka uye panguva yebasa randakazotora, ndakangoerekana ndatora dumbu rangu rizere ne'masutu-akagadzirwa masutu nemota dzekurenda '. Ndafunga kunyora kwechinguva (ndakafunga 'zvenguva pfupi') ndikasarudza pseudonym kuti isakuvadza CV yangu. Saka ndinozvirega ndichidzingwa pakutaurirana kwakanaka, vachindichengeta ndakapihwa mukana wekubatsirwa. Icho kunyora kwakatanga nechinyorwa pane (ikozvino yakabviswa) webhusaiti Argusoog naArend Zeevat uye yakaguma mune yangu webhusaiti. Mushure memwedzi mishoma, nzvimbo iyoyo yakangoerekana yashanyirwa kusvika ku150 kane chiuru pazuva panguva yeAnass Aouragh kesi. Izvi zvakaitika nekuti ndakafunga kungoenda ku 'tsotsi nzvimbo' ine kamera, nekuti Peter R. de Vries akange ataura paTV kuti vhudzi rose nemhando dzose yaizoongororwa munyaya iyi (yega) mhosva yeuponda. Ndanga ndichiziva kuti izvi ndizvo chaizvoizvo uye ndakaenda nekamera kamera kunzvimbo yacho. Ikoko ndakawana tsvina yakawanda panzvimbo iyo Anasi aigona kuwanikwa uye zvapupu zvakashuma kuti vakanga vasiya imbwa yavo ikoko mangwanani iwayochete. Izvozvo zvakaitika panguva iyoyo yakabata nyika yose yeNetherlands uye ini ndakabudisawo nhoroondo yeNFI autopsy. Izvozvo zvakauya mumakurukota, nokuti hapana munhu akanga atanga kuenda, asi zita rangu rakanga risingatauri (iro raizopa kunyange vamwe vashanyi panzvimbo yangu).
Kakawanda pandakapinda mubhizinesi iroro, ndakarwiswa nemhando dzose dzekutengesa paIndaneti uye kuchera uye pasinei nekuzivisa kukuru uye kwakanyatsojeka, hapana chakaitwa pamusoro pacho kusvikira nhasi. Mukuwedzera, hapana gweta anotsunga kupisa nzira apo ini ndinotsanangura kuti zvinogona kuratidzwa kuti mushandirapamwe uyu unouya kubva kumakona ehurumende. Handina kugamuchira mhinduro kubva kumurairi anopandukira Sven Hulleman.
Imwe mitauro yakasiyana-siyana yakakurudzira mumazuva iwayo uye ndakanga ndisinganyanyi kunakidzwa nemasayiti uye vanhu vandakanga ndisati ndanzwa kana kuti ndisinganzwi ndisati ndatanga semunyori. Micha Kat aiva mumwe wavo. Ndakanga ndakakokwawo kune imwe hurukuro yeFrontier uye ndakasarudzawo 'Mutambo weFrontier'. Zvadaro zvinhu zvekutanga zvakatanga kumira. Saka ndaizobvunzurudzwa John Consemulder, asi kamwe pakarepo iyo yakanga isingagoni kuenderera mberi. Basa rangu rakaitwa, asi harina kuparidzirwa kupi zvako. Marcel Messing (zita rinonyanya kuzivikanwa mune mamwe mafirimu) akanditora mukamuri mushure mekuvhara kuratidzwa kweimwe hypnotist. Pano akandiudza ari oga kuti ndaifanira kunyatsochenjerera. "Ivo" vanogona kunditsvaga nechinangwa chekushandisa simba.
Kushandura kwangu mune imwe nzira yemutauro panguva iyi kwakatsamwiswa nehasha nzvimbo dzakawanda dzinoita se dzakasimuka kubva pasi zvakanyanya nokuda kwekutuka uye kuchera pakero yangu. Ndakaona kuti simba rekufambisa iri rakasvibiswa nekunyomba ibasa iri mushandi wehurumende (uye mupristi weOTO) Jeroen Hoogeweij akanga ari, iye panguva iyoyo chaiyo akararama kumativi ekona naMicha Kat. Kunyange zvakadaro, ndakagamuchirwa naMik Kat. Kat aiva kusvikira panguva iyo zita guru mune mamwe mafirimu, nokuti akanga ave achirwa kwemakore achipikisa pedophilia wemurume mukuru wepamutemo: Joris Demmink. Kat akandikumbira kuti ndiuye kuDemmink michakato yeRustige Spijker nheyo uye ndakabhadhara mafuta angu. Nguva iyi yose Kat ainge aikwanisa kukanda mari sekuti yakanga isina, saka iyo yakaisa pfungwa. Panguva yemisangano ndakaziva kuti nhengo dzheyo Dhemmink dzaipomera dzakanga dzaisatya uye dzaityisa kwandiri. Izvozvo zvakaita kuti ndifarire. Sei vakandifungisisa zvakadaro? Ndakanga ndiri mumusasa wavo zvakadaro? Pandakacherechedza ribhoni reruvara pamucheka we nheyo, ndakashamisika kuti nhengo yeheyo iyo inowedzera kurwisa nyika yeDutch inogona kupfeka ribhoni re orange. Saka ndakaenda kuzochera kumashure kwevanhu vari nheyo iyoyo. Semuenzaniso, ndakaona chokwadi chokuti uyu mubati webhandi (anonzi Ben Ottens) akabatsira kuvandudza kukosha kwenyika yakapoteredza Schiphol kubva mukurima kwekurima kuvaka nyika. Imba yevarume, iyo yakabhadhara nheyo iyi Rustige Spijker, inogona kutora mabhiriyoni kubva kuDutch nyika kune iyo nyika (kusanganisira mapurogiramu ekusimudzira mafungiro). Ndakaona zvakare kuti nheyo dzakabatanidzwa Jack Abramoff, murume uyo akanga atsigira 'hukuru hwepamusoro' muUnited States nekunyadzisira mafirimu. Saka ndakanganisa uye ndakangoerekana ndaona kuti Kat aibhadharwa neveMhuri yevarume uye kuti zvose zvakava kunyengera kukuru. Saka mhosva yaDhemmink haina kuratidza kupoteredza kushandiswa kwezvinyorwa zvekufamba pedophile, asi zviri pachena zvakanyanya nezvekudzingwa kweDutch nyika.
Zvisinei, Websites vose dzimwe nhau, akazviratidza panguva dzevanhu dzakapoteredza zvavo (kusvikira) gamba Mika Kat, havadi kutarisana. Ndakanga ndakatomirwa kumusangano weredhiyo umo ndaigona kutsanangura zvandakanga ndawana. Yakati kwandiri kuti ichi aizova 1 1 kubvunzurudza, asi panguva mhenyu yenhepfenyuro yakaerekana vakazivisa kuti waMika Kat aivawo zvekuratidza. Yaiva nzira akaoma, asi Mukutepfenyura akaita Kat shoma zvakanaka, nekuti ini chete vakakwanisa vanozviminamisa kuti akanga akabhadhara nemhuri Paw uye zvirokwazvo vakashanda pamwe Jack Abramoff. Izvo zvose zvinoshandiswa mune zvinyorwa zvekare zvakabva zvisingandifungiri separiah. Vakatora zvose kubva kwandiri mune ichi opprobrious uye enhema kurwiswa uye zvose (pasina Niburu.co uye Mika Kat raMwari Whistleblower Online nzvimbo) vakanga kana kwete akaisa zvakaoma anobatanidza kune nyaya yangu, asi ikozvino vaifanira nditenderei vakarwisa zvakasimba uye kunyange kurwisa nekuda kwekutsvaga kwangu kubva kuna Micha Kat.
Zvose izvi zvisati zvamboitika, ndakanga ndave ndakokwa naMarcel Messing kuti ndive nemusangano kuti ndibatanidze masimba mune imwe mhizha kumaodzanyemba kwenyika. Ikoko ndakawana rubatsiro ikoko nokuti ndakanga ndabhadhara kubhadhara mari yangu yemafuta. Zvaiva pachena kuti WW yangu kubatsirwa kwaiva kuburuka kwebhizimisi. Ndakanga ndisingakwanisi kupona panguva iyoyo uye panguva iyoyo imba yangu yakanga yatotamiswa kunomanikidzirwa kurarama yakamanikidzwa kurwisa-squatting. Ndokusaka ndaifanira kutyaira maawa 4,5 nemaawa e4,5 mumotokari yekare yekutengesa mafuta. Pamusangano nzira Vezvenhau Websites, apo chaizvoizvo munhu wose mukurumbira mukati nzira vezvenhau akanga aripo (Marcel Brass, Ad Broere, Guido Jonkers, etc.) akakurukura pokugadzwa pamwe. Panofanira kuva neboka rose rezvemamwe mavara. Marcel Messing akaratidza kuti aiziva vanhu vaida kuita mamiriyoni epo. Ndakaona kutarisa kunoshamisa uye kwakamutsa mubvunzo wekuti "vanhu" ava vaizova ani. Handina kumbobvira ndawana, nokuti kuvapo kwangu kwakanga kune imwe-kubva. Ndakava pachena kutyisidzira mushure mekutsvaga kwaMikha Kat.
Rino rine nayo
Kubva 2014 Ini pakarepo ndakaona zita idzva richionekwa panzvimbo. Mumwe mukadzi anonzi Irma Schiffer akazviratidza pakarepo kunyora nyaya nyaya kuti ini broached uye zvaiita sokuti pakanga kuti raparurwa nzira Martijn Vrijland muchimiro ichi Irma Schiffer. Mudzimai uyu akakurudzirwa zvakasimba kuburikidza nenzvimbo dzose dzinozivikanwa mune mamwe ma media. We Akaonawo kuoneka panzvimbo imwe wenhau akwegura anonzi Judy Monshouwer akaita zvakafanana zvaitwa pamberi wenhau German Udo Ulfkotte. Ulfkotte 17 makore vaishandira Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'kana' FAZ 'uye akabuda bhuku umo akazivisa kuti deginamajai dzimwe nguva bribed vatapi venhau. Netherlands vasingagoni kugara kumashure, saka takawana kwedu 'Udo Ulfkotte' ari muchimiro anoyamura uye yakavimbika kutarira Janneke Monshouwer. Akaparidza zvakanyanya kana zvakafanana nezvemazuva ekuDutch. The club WantToKnow, Nyika Matters, uye dzimwe nzvimbo dzakawanda dzinokurudzira zvakadzama mazita matsva ataurwa pamusoro apa. Izvo chaizvoizvo izvo chiAmerican chakanga chichida kunzwa.
Isu takangoerekana taona kubuda kwemarudzi ose emamwe mazita matsva, akadai saMartijn van Staveren, Willem Felderhof uye Coen Vermeeren. Vanhu vose vaibatanidzwa munharaunda-dze "nharo dzenyengeri" kana zvekunamata. Akasimuka pakarepo kunomeresa kubva pasi uye zvaiita kuti, sezvo wangu chaizvo nguva 2013, akanga pakarepo kuva scaled huru kubata kuda vanhu muNetherlands. Handizvo chinangwa changu chokukurukura uye kuzadza mazita aya 1 ye1, nokuti unogona kuzviwanira iwe pachako kana kuti hauna kuvimbika. Ndinongotsanangura maonero angu. Martijn van Staveren Ndakatotaurirana kamwechete; Willem Felderhof yakanga ichangobva kuendesa mberi mushure memusangano unonzi 'Open Mind' uye Coen Vermeeren akazvikurudzira semuongorori waUfo uye 911.
Zvose izvi mazita azvo zvakafanana ndezvekutsvaga kwavo nokukurumidza uye mari yavo inoratidzika isingagadziriswi, mikana uye 'kunzwa zvakanaka profile' uye kukurudzirwa nezvose uye nevose mune dzimwe nyika nhau. Izvozvo zvinogona uye unogona kufunga izvozvo sezvo zvakanaka, paunenge uchida nyanya, godo, kuvhiringidzika kana kuzvidzora akasika voga 'Martin Vrijland anogona kufunga. Hapana chazvo. Ndingada zvangu ndine vakomana maonero akauya kushanda zvakanaka pamwe vaitsvaka chokwadi, kuti dzifunge kunyora pamusoro kwangu maonero nhau uye Current Affairs, asi nekuti ndakaona kuti nyaya sezvariri dzikapiswa vari chinowanzonzi desinfo kana nzira dzenhema, ndinonzwa ndakadanwa kuti ndipe nyevero yakajeka. Ini ndinokuyeuchidzai nezvekuti mawebsite ose mune mamwe mashizha akandirapa ini apo (uye zvinopikisa kubva panguva yacho) ndakafumura Micha Kat. Izvozvo zvinofanira kuita bhero rinyorera.
Izvo zvese zvitsva zvinokonzera mushwa zvakare zvakafanana ndezvokuti hazviiti sezvinokanganisa nekuzivisa kwe 'mano avo ekunyengera'. Izvi zvinofanira kudiwa here? Zvinoshamisa zvikuru kutaura kuti izvi zvakaitika kwandiri. Izvozvo hazvina kuguma nekunyomba uye kuchera pamusoro pezvakaipa, kuiswa mujeri, kupopotedzana nezvakadaro, asi kunyange kuenda kune kure zvokuti marudzi ose emashoko pamusoro pemwanasikana wangu anosanganisira makore, nzvimbo yekugara uye chikoro yakatumirwa. Asi izvo zvakasara zvachose zvisingaoneki uye zvisati zvasarudzwa nezvose zvinyorwa zvemashoko. Hongu, zvichida iwe unogona kukwereta izvozvo iwe pachako, pfungwa yacho ingangodaro, asi chokwadi chokuti zvinhu zvakagadzirwa uye kuzivisa hazvina basa; chokwadi chokuti izvi zvinopupurirwa kuti zvinobva kumushandi wehurumende yehurumende; kunyangwe kutambudzwa kwakadaro hakusi kune vamwe vatsva; Kuwedzera kune chokwadi chokuti vanokurudzirana uye vanotsigirana, vanofanira kumutsa mibvunzo. Zvingave here kuti vose vakarovedzwa uye zvakatangwa neAIVD? Kana kuti iyo ingano yeruzivo here?
Mira kwenguva. Saka isu tinogona kutenda kuti hurumende dzinoshandisa mapikisi emanyepo emanyepo uye kuparadzira uye kushandisa zvinyorwa zvemashoko makuru, asi hatigoni kutenda kuti basa rekuviga rine mamwe ma media mune muhomwe? Sei uchida imwe kungofamba kunotyisa zvikuru kugara usina kunetseka? Vladimir Lenin atove ataura kuti nzira yakanakisisa yekudzora kushorwa ndeyokupa hutungamiri kune iyo kushorwa. Kana kuti ndicho chimwe chinhu chakashandiswa munguva yekare, yakaoma Soviet Union? Zvingave here kuti maoko eAIVD's octopus muNetherlands angangove akapfuma zvishoma kudarika vanhu vakawanda vanofunga? Zvinogona kunge zvakadaro the godfather weDutch alternative media, Marcel Messing, uyo akapinda mumatunhu akakwirira uye asingaoneki muhurukuro, haasi iye akatanga nheyo iyi muNetherlands? Kuti uite kushorwa kwakanaka, unofanira kupa vanhu zvavari kutarisira: 'chokwadi'.
Mukutsvaga kwako kwechokwadi, pfungwa yacho ndeyokuti iwe unenge uine kunzwa kuti 'izvi zvinonzwika zvakajeka'. Zvino iwe unosvika panguva ye eureka apo munhu wese ari kutsvaga kunze kwekuvhiringidzika pamusoro pezvinyorwa zvemashoko makuru uye zviri pachena kuparadzira uye (kunyanya) zvinoreva. Zvinoratidzika kuti ichi chidimbu chave chakapinda mune imwe nzvimbo yepamusoro kubvira neA2014. Irma Schiffers, somuenzaniso, anonyanya kubatikana nayo. Kune chimwe chinhu kune vose vari mune mamwe ma media. Iwe unotenda here kuti nyika yakazara? Ipapo iwe uchagamuchira izvozvo. Unotenda kune vatorwa kana UFOs, unogona kuenda kune dzimwe nzira uye iwe unogona kuwana "kusimbiswa" mune zvemweya nemunhu akafanana naMartijn van Staveren. Iwe unotenda here kuti vana vanofanirwa kubayirwa? Ipapo iwe unogona kuwanawo kuti munguva ichangopfuura ne "wekare mubhengi uye mukati" Ronald Bernard. Uye zvechokwadi kune zvidzidzo zvekuti munhu wose ari kuvhara nzeve dzavo pamusoro pezvino: 911, vaccinations uye chemtrails. Iwe uchashumirwa pa WantToKnow, Earth Matters, Ninefornews nezvimwe zvakadaro. Tinogona kuitumidza kuti 'imwe sangano rekubudisa nhepfenyuro' uye kuti chechi inowanzodikanwa nevashumiri vasingasviki. Vafudzi vane ruzivo rwakanaka, ruzivo rwakakwana uye nyaya inokurudzira. Vaya vanotya kutaura kuti nyika haisi yakadzika uye kuti 'mureza wenhema' pane dzimwe nguva inopesana kana iyo inoshevedza kuti iwe uri kutambidzwa sezvinoita muterevhizheni weve terevhizheni kamwechete akatamba vaAmerica vateereri, iwe haudi ivo mune izvozvo chechi.
Icho chiri chekuda kwako kutsvaka chokwadi. Ichi chinokurudzira chikonzero chakanaka chekumuka kwevakawanda nekuda kwekunyengera uye kunyengedza kwemashoko makuru. Asi kuti uwane chokwadi, haufaniri kudzidza kudzidzira ubongo hwako. Unofanirwa kudzidza kuti iwe unogona kuwana zviri nani nechechi yakasimba uye yakavimbika. Nenzira iyi iwe uchazodzidzazve kuvimba mushumiri, sezvo mufundisi akaparidzira chokwadi chepurupiti kune vanoenda kuchechi. Nenzira iyo iwe zvakare unogona kukwanisa kuvimba nevashumiri vatsva vezvimwe zvemashoko. Uye ichi ndicho chikonzero kuti zvakakosha kuti uzive kuti uri kushanda nevashumiri vakavimbika vari kukutsva chokwadi chechokwadi nokuti vakatsvaga izvozvo. Zvino haufaniri kuita chimwe chinhu iwe pachako. Iwe hauna nguva yeiyo uye mufudzi akaidzidzira. Zvakanaka, izvi ndezvemharidzo yeCoperatie Vrije Media; iyo inotanga kuendeswa neAd Adere uye Irma Schiffers, asi iyo inowanikwa kubva kumusana wezvimwe zvemasvikiro izvo zvave zvichishanda pamwechete mushure mezviitiko. Ichi ndicho chiitiko chakanga chagara chataurwa panguva yandainge ndiripo pamusangano naMarcel Messing.
Chii chave chiri chiito mumakore achangopfuura? Kana akatendeuka kubva kuti kuroora kubvisa Vatsvakurudzi zvisingadiwi Martin Vrijland kuburikidza chinyorwa uye kuchera online, haana kuguma "regedza", vaiva zviuru vaverengi ose zuva saka pakarepo akasangana nemamwe maonero matsva kubva munyori avo ndisingadiwi. Iko kunokonzera kuvharwa uye kuvhara iyo kuora, munda wekutamba wakanyatsogadzirirwa nemiti. Miti yemiti iyo yose inogona kukura zvishoma uye yese yakanga ine chimwe chinhu chinonakidza kutaura pamusoro pezvinyorwa zvakataurwa, asi nguva dzose zvakasiyana zvakasiyana. Imwe musango webhusaiti mune zvinyorwa zvimwe zvinoshandiswa. Kuti sango yakanga zvose iyoyo kare raitungamirwa AIVD uye noruzhinji akashanda nzvimbo idzodzo kare zvakanaka chikwata pamwe vatarisiri sezvo Marcel Brass uye Guido Jonkers, asi yakanga maziso ari kutarisana munda sezvo zvisinganyatsozivikanwi en ruzivo rwehuwandu. Iwe hauna kuona musango mumiti yacho zvakare! Uye iyo ndiyo chaiyo chinangwa. Uye tada! Nenguva isipi kune vashomanana vanovimbika-vanoona baba namai marudzi (avo vatove vachibva kune rimwe marara). Wakavimbika-anotarisa mune zvezvematongerwo enyika Ad Adere uye Irma Schiffers anovimbika. Izvo hazvisi izvo zvinoita kuti uwedzere 'kunzwa zvakanaka' zvinogutsikana here? Uye zvechokwadi tine nguva yakanaka uye inofara Arjan Bos yepasi Matters avo vanoda chaizvo kubatsira kubhadhara masangano mashoma aya kupinda muChinyamu chechi huru. Unogona kufunga kuti ndiani anosarudza vashumiri. Uye iwe ungada here kuva nhengo yechechi iyi? Chechi inoda mari yekuita zvirongwa zvayo zvose zvakanaka. Kuti pane mari shure kwezviitiko (saMarcel Messing zvakangoerekana zvareva pamberi pangu pamusangano) haufaniri kuziva. Chechi yeKaturike inewo mari, asi nokuva nhengo unosimbisa kutenda kwako, uye iwe unozvipa iwe kuchechi. Iwe unofanirwawo kuita ikozvino nechechi iyi itsva yeDe Vrije Media. Vachakutsvaka chokwadi kwauri. Mushure mezvose, ivo zvino "vakavimbika vakavimbika". Aa, uye kana iwe uchitova nhengo yechechi iyoyo yakatendeka, hauchazofaniri kutsigira munhu akadaro Martin Vrijland, asingakwanisi kunyange kugamuchira rubatsiro rwemagariro evanhu. Mushure mezvose, iwe watotanga kupa chikamu chinoratidza kuti chakavimbika. Kugamuchirwa kuchechi itsva. Mission yakaitwa. (Verenga zvakawanda pasi pevhidhiyo)
Kubvira ikozvino iwe unogona kushumirwa ne "chokwadi chechokwadi" cheDe Vrije Media. Iyi ndiyo nzira iyo AIVD yakatanga kusika musango uye ndiyo ndiyo iyo ikozvino iri kutanga mhinduro. 'Nzira yakanakisisa yekudzora kushorwa ndeyokutungamirira iwe pachako'. Asi unoziva sei kuti AIVD iri shure kwayo? Iwe unoziva sei kuti yakatsvaga? Tora mazaruriro omumwe mubhengi wenyika Ronald Bernard! Ndiani anotaura chokwadi? Hongu, hongu! Sezvandareva, iwe uri kutsvaga chokwadi uye iwe uri kushandiswa nechokwadi. Kunyange zvazvo 'chokwadi' ndechechokwadi chirevo. Unoziva here kuti iwe unoona chokwadi kana iwe uri muchikepe ichifamba nemhenderekedzo yegungwa? Kuti une mvura yakakupoteredza, ona gungwa uri kure uye ugove wakakombererwa navamwe vafambisi; iyo ichokwadi chisingagoneki. Zvamusingagoni kuona ndizvo zvinoitika kumhenderekedzo. Ngarava inotungamirirwa inoenda kumhenderekedzo.
Mumufananidzo uri pasi apa haufaniri kutarisisa kuti uone migwagwa yakasvibiswa. Uye dzimwe nguva unoona tsananguro. Asi iwe unogonawo kuona mavara ose kamwechete here?
Mune chimwe mufananidzo (ona pazasi) unogona kuona zvakajeka mufananidzo vatema uye chena, asi kana ukatarira rebei kupfuura 10 mumasekonzi (pfungwa meso ako pamusoro 4 Dots), ipapo boira meso enyu uye zvose anotarira kuvheneka kumusoro, iwe uchaona "chimiro chakanaka". Uchaona chifananidzo chakavanzika. Nenzira iyi maonero ako echokwadi anogonawo kutamba. Kana iwe uchifunga kuti uri kuona chimwe chinhu chakanaka, iwe uchiri kuratidzika uchinge uchinge uchinge uchinge uine huwandu hunoti kana chifananidzo chinoratidzika chinovanza chifananidzo chakadzika. Zvakadini kana nhepfenyuro yakakura ichikupa 'mutsvuku' mumufananidzo uri pasi apa uye mamwe ma media iwe "mutsvuku"? Chii chinobuda? Iwe haugoni kuona chifananidzo chakavanzika. Uye izvozvo, mumaonero angu, ndizvo chaizvo zvinangwa.
Izwi rokuti 'light worker' ishoko rinodiwa mune mamwe ma media. Izvozvo 'chiedza' zvinopenya murima. Kana saRonald Bernard iyi firimu anotsanangura zvakajeka paanoti boka revanhu riri kugara murima kwechinguva uye rinofanira kushandiswa nerima. Ipapo magetsi anovhenekera chiedza uye munhu wose anotambudzika nechiedza. Inonakidza inofadza, asi chiedza ichocho chinongogona kureva chiedza chaLuciferian. Ndichadzoka kune izvozvo gare gare. Mubvunzo waunofanira kuzvibvunza ndewekuti: Kana imwe shanduro yemutauro inomiririra 'mutsvuku' (chiedza) mumifananidzo yakasviba yezvinyorwa zvakanyanya, unoona chokwadi kana mumvuri wezvokwadi?
Iwe unoda uchapupu hwakaoma hwokuti mamwe mavara ezvinyorwa akaiswa neAIVD. Ivo vanotaura zvakanyanya kuti ndinoita, saka ndinokunzwisisa. Zvakangofanana nemufananidzo uri kumusoro; rwunoita ukaona vatema uye chena, asi kuona mufananidzo yakavanzwa, unofanira ndee kwekanguva kuti 4 Dots, uye ipapo zvose uchiona maziso ako uye kuti kuteerera zvinhu uchaona. Ndinogona kungokuratidzai mhirizhonga yemufananidzo wakaoneka wakaratidzwa. Uye iwe unogona dzimwe nguva kutaurira kubva kumativi iwayo ayo vanhu vanoita uye kuti nyaya dzinoratidzika se 'dzakachena' mufananidzo wakavara, asi kuti dzinobata chifananidzo chakavanzika. Kuti uone mufananidzo wakavanzwa mumufananidzo unooneka, ingovhenekera maziso ako.
Nyaya yaRonald Bernard iri mupfungwa iyoyo muenzaniso wakakwana. Ronald anokuudza zvinhu zvose zvinoita sezvo zvakarurama. Anokuudza kuti nyika yebhangi inoshanda sei uye inotsanangura kuti vezvematongerwe enyika vakomana vaduku vebhangi yebhangi; iyo banking system iri pamusoro pe piramidi. Pamusoro pepiramidi ibhangi reBIS; pasi pemabhangi makuru uye pasi pemabhanki evanhu. Anotsanangura piramidi inozivikanwa zvikuru iyo munhu wese anenge ave achishanda kwenguva yakati atoziva mamwe ma media. Ronald anoita seanoisa munwe wake pamatambudziko ose! Irma Schiffer akabvunzurudza naye uye pakupera Part 2 kubvunzurudzwa akatevedzana (izvo zvangoitikawo anotora akashambidzika Masonic nhamba 33 kwemaminitsi) Ronald ane Masonic chisungo anokwezvwa zvakare munhu kutaura angatsunga kuzochera nyaya rake mubvunzo kamwe shure uye akatsamwa . Izvozvo zvingangodaro zvinotungamirirwa kune mamwe maitirwe akachengetedzwa akabatanidzwa naMicha Kat, avo vakanga vachivhima CV yaBernard. Ndakanga ndisati ndanyora pamusoro paRonald munguva yekubudiswa kwefirimu ino.
Ndanga ndichitsvaga nzira dzeNLP mumutauro wepakati pekare, asi Ronald Bernard anoshandisawo nguva yakazara. Kunyanya ruoko rwemaoko mukati memaawa ekupedzisira evhidhiyo iri pasi apa inopa zviratidzo zvakajeka. Kupararira maoko kunopa shoko re subliminal "Ini ndiri mukuru" (uye iwe uri muduku); inzwi rakanyarara rekuzvidzora rinopararira kubva pakutsamwa kusvika mumanzwiro uye pakupedzisira kuitwa kusvimha; iyo inonongedza minwe inoti izwi rakatsamwa nemutauro wemumuviri 'ibata waffle yako'. Ronald anopa shoko risina ruzivo rwe "Ini ndine simba" mumapfekete ekugadzira, maoko nemaoko. Yose kubvunzurudzwa inopindirwa ne "chokwadi chisina chokwadi" uye Irma zvikuru ane basa rekuti hongu "uye" uye "kurudyi", kuchengetedza pfungwa dzako nenzira yekuita. (Verenga zvakawanda pasi pevhidhiyo)
Mandiri chokutanga chokutanga NezveRonald Bernard Ndakatsanangura kuti zvakajeka sei kuverenga kuti iye mutambi. Irma Schiffers anoitawo kunge ari kushandisa Derren Brown 'Zvishamiso zvekutengesa' nzira (ona iyi firimu) vakadzidziswa. Ichokwadi kuti nyaya yake yakakwana zvakare. Iye muveki, ane HSP uye .. zvakanaka iwe unogona kuverenga zvaanozviti [quote]
Akaberekwa (zvakanyanya kukanganiswa) pana 3 February 1962 mune imwe nzvimbo muHilversum; Jungian therapist; muchengeti wezvokwadi; coach; lightwarrior; zvakatsaurirwa kune vanhu, mhuka nezvisikwa; anonzwisisa uye anogamuchirwa kune unyengeri uye huori, intuitive muchengeti; (ex-) bassist; hongu zvakare HSP; social idealist; manzwiro ekuseka, mumweya uye pasi (zvose-in-one!) uye waterman in optima forma; Ndinoenda nokuda kwaro rusununguko, rusununguko, kuenzana, ruramisiro, pachena uye kuvimbika. Inowanzotsanangurirwa nevamwe sevasingakoshi, vanyengeri uye vane simba ".
Ikoko tine izwi rokuti 'lightworker' zvakare, iro raunenge warova kakawanda mune mamwe mafirimu. Unoyeuka kuti ndiani uyu chiedza chakabva; ndiani anoisa mavara akachena mumifananidzo yakasviba? Zvechokwadi, Irma inonyatsonzwa neHSP yake. Icho chinhu chakanaka, nokuti nekuda kweizvi (uye kwete kuburikidza nekutsigirwa kwayo kubva kuAIVD) iye kamwe kamwe anoziva kutaura pamusoro pezvinangwa zvose kubvira 2014. Asi icho hachisi icho chete! Irma isiriwo. Zvakanaka, iwe uri nani neIrish! Iye anonzwa chakanaka kana chimwe chinhu chakanaka uye inopenya yakachena pamucheka wakachena.
Iye zvino unogona kufunga kuti ndinongoidza chete uye kwete kuuya neuchapupu. Wakaona here zvaunofanira kuona mufananidzo wakaita nemuchena? Ini ndinotsanangura mazano. Iwe unotofanira kuedza kuiona uye kwete wese munhu anozviona. Ihwo humwe humwe humwe huripo huri mumufananidzo uye hunovanzwa mharidzo.
Kusvikira munguva pfupi yapfuura, mashoko aya akavanzika akanga asina kunyatsooneka, asi iwe ucharatidzwa. Dambudziko rega nderokuti iwe haugone kuzviona. Iwe unogona kutove uri muchechi panguva ino uye iwe uri kutobhadhara mupiro uye Coöperatie Vrije Media kana wakatobhadhara € € 100 kunyadzisa kune Womufaro B (uyo asingakwanisi kuzvitumidza bhangi). Iwe hausi kuzorwa nechechi inonyatsojekesa rima? Zvakanaka, ipapo iwe unogona kuvhara maziso ako kune chiratidzo.
Somuenzaniso, muverengi akacherechedza zvinotevera pamusoro peJoy B (ank) waRonald Bernard [chirevo]
Ndakatarisa izvi kwenguva yakareba peji peji yebhangi rinofadza. Chinhu chokutanga chaunocherechedza ndechokuti chikwangwani chearandani chinomiririra chiratidzo chepallic pane zvinyorwa zvaro. Pamwe pedo neyo slogan "bhangi yako mukugadzirwa."
Uye mumwe mutauriri akati zvinotevera [quote]:
Db logo yeDe Blije Bank inoratidzwa. Iwe unogona here kuyeuka mafananidzo iwayo eredhi reRothschilds kusanganisira mifananidzo? Kadhi yekukoka yakanyorwa muchiratidziro ona pano.
Chionioni zvechokwadi chiratidzo chakakosha cheAlexister Crowley (Luciferian) maitiro e'kudzosera kupikisa 'uye dzimwe' nzira dzepasina '. Chionioni chinoratidza, sezvazviri, kuti iwe uri Luciferian. I 'd' iri mune chinyorwa cheHeri B inopa 'b' muchioni chemufananidzo. Uyezve, idzi idzi mbiri dziri pedo kune mumwe nemumwe dzinopa zvechokwadi chiratidzo chepallic (umo shoko rokuti 'kusungirirwa' mumutauro we "bhangi mukuumbwa" rinoreva nechokuita phallus erection). Saka icho chiratidzo cheRuciferian. Asi zvakanaka, ngatirege kuzviita zvakaoma uye tangotarisa pane chikwata cheUnited People foundation. Iwe haufaniri kutarisisa zvakanaka kuziva piramidi? Lucifer vatsigiri nevatsigiri vekuti 'Isu tiri tose', 'World World Government' uye 'One World Religion' nguva dzose vanoratidza ruvo rwavo rwaLuciferianism nokuti vanotenda kuti izvi zvinoremekedza mutemo wekusununguka. Vanodawo kukuratidzai chokwadi, kuitira kuti mifananidzo yese yakajeka. Vanoumba mutsvuku pamatema, asi iwe unongotarisa mufananidzo wemufananidzo wakavanzika.
Vanhu Vokubatana vanoda kubatanidza vanhu vose. Hazvisizvo chaizvo here Luciferian? Iwe unogona kubva zvirokwazvo funga piramidhi iri muchiratidzo seisina mhosva. Iwe unoziva chiratidzo cheC 666 neArjan Bos kubva kuNyika Matters neimwe yemavhidhiyo ake eYouTube? Vaparidzi veimwe sangano rezvenhau vanofarira kukuratidzira mune imwe musasa ivo, asi vakavanzwa. Iwe unoziva girazi muvhidhiyo iri pasi apa shure kwa Irma Schiffers? (Verenga zvakawanda pasi pevhidhiyo)
Munhu anopindura munyaya yangu yapfuura anoenderera mberi ne (asi isati yatsigirwa) comment [quote]
De Blije B. yakabva kuSwitzerland, ingave yakasiyana sei, handizvo? Mhedziso yavo ichave yakanyatsokurudzirwa ndokuzodzingwa kune mamwe mabhanga, ndinofungidzira zvakadaro.
Kana iyo isiri chiratidzo pamadziro? Saka iwe unonzi uri wepamusoro-bhengi; rinotsanangura kumatambudziko ose angave atowanika mune mamwe mafirimu; anounganidza izvi mumagariro ehurukuro naIrma Schiffers; kutanga bhangi iwe pachako! Ronald uye Irma nevamwe vatambi vose vari nzira nevezvenhau vane ukaedza abvume aine nyaya zvakanaka rinotungamirirwa uye tendeka kwazvo, iyo inogona kuwanikwa zvose zvinhu vaigona kare kuwana ose chokwadi kutsvaka iri kwemakore. Iko kuunganidza kwakanaka uye kunyatsoiswa. Asi iyo inoramba iine kunhuhwirira kwepamusoro-soro kuitenderera. Irma Schiffers haana kubvunza mubvunzo unotsvaga weC1 uye nyaya dzose dzaRonald Bernard dzisingazivikanwi. The yose nzira vezvenhau yatorwa pamusoro uye akahushandisa vabatane dzimwe vezvenhau vari kutanga pamusoro Cooperative Free Media. Vachakuratidza nzira kuburikidza ne (self-created AIVD) musango kune mamwe mashizha emitambo (pasina kana kuti kukuudzai kuMartin Vrijland).
Disillusion uye zvino?
Zvakanaka, kuvonga nokuda kwekuora mwoyo uye chii zvino? Ndiani wandingavimba iye zvino uye chii chandingave ndichiriverenga kana kwete. "Isu isu kubva mudha rembudzi, rairai dhongi dha"Zvingava nyore kwazvo, asi ini ndinokurayira kuti uverenge zvinyorwa zvangu, kunyanya kuti urege kuenda kune" kereke itsva "uye" mushumiri akasiyana-siyana ", asi kuti uite kuti iwe pachako unhu hwakanaka uye mweya wako. kuti ibatane. Hungu, 'vashandi vechiedza' vanokuudza izvozvo zvakare, asi vanoda kukuchengetedza mumatrix aLuciferian. Ndinovimba kuti iwe uchapukunyuka kubva ipapo. Saka kana imwe shanduro uye mhizha inoparidzira mufananidzo wako, unofanira kuona mufananidzo wakavanzwa kuburikidza nomufananidzo. Vanoita kuti iwe ufeve mufananidzo wakavanzika.
Tarisa kumashure pane chifananidzo chiri kumusoro nemitsetse yakachena. Iwe unoona zvose ikozvino nechaita dot uye rinoratidzika semaruva akabatanidzwa neavo mamwe mashizha, asi hauna kumboaona ose kamwechete. Vanokuchengetedza kubva pamusana wekusununguka zvachose kwematrix aLuciferian. Kunyangwe vachienda kuzokuudza kuti zvibayiro zvevana zviri kuitwa mumatanda makuru. Wakambotadza here nemafungiro aRonald Bernard? Kana unoda here kuva nhengo yeChechi Inofara zvakadaro? Uye usakanganwa Free Media! Vanonyatsoda rubatsiro rwenyu!
Zvose izvi nzvimbo dzinoitawo zvinokumbira zvipo apo uchiviga mari. Iri urongwa hwekufunga, kuitira kuti abate mhepo kunze kwezvikepe, izvo zvinoparadzwa zvachose uye hazvina magumi matsvuku. Ndiani achatora Martin Vrijland kudana kwekutsigira rubatsiro zvakanyanyisa kana dzose idzi dzewebhu (dzibhadharwa neAIVD) zvose dzinoita se dzakanaka? Zvakanaka ... uye icho chaive chinangwa.
Rusununguko rwekutaura runogona kunge rwuripo rwepamutemo, asi iwe unongoparadzwa mune zvevanhu semari. Nenzira iyi unogonawo kutsoropodza kutsoropodza kwako. Nokuti ndave ndakatarisa zvizere nemipiro inokonzerwa nezvose zvakasvibiswa uye kusvibiswa uye kutengesa kwepaIndaneti, ndinoda kukukumbira kuti unditsigire. Izvi chaizvoizvo chikumbiro chakakomba (kusiyana nechekudanwa kubva kune dzinochengetedzwa kushandiswa kwemasayiti iyo yose inoshamba muhupfumi).
Kuti zvijekese kuti handitengesi dumba, unogona kuona ukuru hwezvipo izvi paIndaneti iyi link.
Bvunza zvose! Funga iwe pachako. Usanyengerwa ne "zvokwadi" uye kuisa mufananidzo wacho, kuitira kuti iwe usanzwisisa chimiro chaiye uye chakavanzika.
Total Visits: 1.244.509